Chikafu Fekitori - China Chikafu Vanogadzira, Vatengesi
Kupisa uye Sour Vermicelli
China inopisa kutengesa echinyakare tudyo
Paunenge iwe waedza, iwe uchachifarira.
Hot uye Sour, chiveve, kusimba kuravira, kuomarara uye kutsenga
Makedhi yero peach imhando yemagaba michero yakagadzirwa kubva kune yero pichisi. Yakapfuma mukuwedzera vhitamini C, muviri wemunhu waida fiber, carotene zvichingodaro. Inogona kudyiwa nekukurumidza mushure mekuvhura muvharo kana mushure mekudziya. Muzhizha rinopisa, mapenji machena emumagaba anozoravira kunyange zvirinani mushure mekupera firiji. Michero yedu yemumagaba inogadzirwa mufekitori yemazuva ano ine zviyero zvakaomarara, hapana zvinowedzerwa kana zvinodzivirira zvakawedzerwa. Zvigadzirwa zvedu zvemuchero zvemumagaba zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri pasirese, uye perekisi yero yemumagaba ndiyo inonyanya kufarirwa chigadzirwa.
Mutsva Bean Curd Stick
Nyowani bhinzi curd tsvimbo, inozivikanwawo seyuba nyowani, ndeyechivanhu bhinzi inogadzirwa chikafu uye chinowanikwa chikafu mbishi zvinhu munzvimbo dzeChinese neAsia. Ine chihwitsi chakasimba chebhinzi uye kuravira kwakasarudzika izvo zvisina zvimwe zvigadzirwa zvebhinzi. Matanda matatu emabhinzi akakwenenzverwa anogadzirwa nesoyabhinzi, bhinzi yakasvibira uye bhinzi nhema, ichichengetedza iro rekutanga bhinzi, pasina zvinowedzerwa, zvine hukomba hwakapfuma uye hwema hunotapira.
Mutsva webhinzi curd tsvimbo ine huwandu hwehuwandu hwemuviri, iine 14g mafuta, 21.7g protein, 48.5g shuga uye mamwe mavitamini nemaminerari pa100g. Chiyero chezvinhu izvi zvitatu zvine simba chakanyatsoenzana. Kudya usati uye mushure mekurovedza muviri, unogona kukurumidza kuzadza simba uye nekupa protein inodiwa pakukura kwemhasuru.
Soy Sauce Mapaketi, Mutsva Bean Curd Stick, Hawthorn Strip, Ladyfinger Cookie, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Vana Mabhisikiti,